Iinkqubo zolawulo lobhaliso: CheddarGetter | Martech Zone
Kule veki kufuneka ndichithe ixesha neqela e I-Sproutbox, i-incubator emangalisayo yetekhnoloji eBloomington, eIndiana. I-Sproutbox yasekwa ngababhekisi phambili abathile abagqibe ngento abayithandayo kwaye babelungile ekuthatheni umbono kwaye bayizisa kwintengiso njengesisombululo. Benza loo nto ngokulingana kwiiprojekthi abagqiba ekubeni bazenze kwintengiso.
Ndizokuzimasa namhlanje njengowokugqibela kwelandelayo Ihluma… Iprojekthi abagqiba ekubeni bayizise kwintengiso elandelayo. Elinjani ithuba elimangalisayo kunye nomsitho-kunye nabazimeleyo kunye neejaji ezivela kwihlabathi liphela. Kwiiveki ezizayo, ndizakugubungela uninzi lweziqalo zebhloko ekhulayo… uninzi kufuneka lujongane netekhnoloji kwaye ezinye ngokuthe ngqo kwintengiso.
Enye yeempumelelo ze-Sproutbox yile CheddarGetter. Nangona ndingenguye fan omkhulu wohlobo (uxolo Sproutbox :)), imveliso iphezulu-inotshi. I-CheddarGetter ivumela amashishini ngemodeli yengeniso ephindaphindayo ukudibanisa, ukulandelela kunye nokuhlawula abathengi babo.
Uluhlu lweempawu lungaphaya kwexabiso lenkonzo. Ixabiso lenkonzo lilodwa lihle kuba iCheddarGetter iyathobela i-PCI… kodwa banikezela abathengi babo ngesicelo esomeleleyo ngeqhezu leendleko zabanye abakhuphisana nabo.
I-CheddarGetter yeyokuqala "iplagi kunye nokudlala" ulawulo lokubhaliselwa kunye nenkqubo yokuhlawula. Nokuba uqhuba ishishini lobuchwephesha be-SaaS okanye ishishini elincinci, elisekwe kwinkonzo, uCheddar Getter yeyona ndlela ilungileyo yokulandela kunye nokuhlawula abathengi bakho. Faka nje iziqinisekiso zeakhawunti yakho yomrhwebi, kwaye uCheddar Getter uya kuqala ukubiza abathengi bakho kwangoko. Isuka e CheddarGetter indawo.
Ezinye zezo zinto zibandakanya intlawulo encinci, intlawulo encinci, ukubalwa kwemali, imida yokusetyenziswa ethambileyo, intlawulo yokusebenzisa, ukubiza ngaphezulu, izicwangciso zamaxabiso, amaxabiso emephu, izongezo, iminikelo ephindaphindayo, izaphulelo, iikhredithi zexesha elinye, ukufumaneka okuncinci amaxabiso, ukuhlawulwa okuzenzekelayo, utatomkhulu wamaxabiso, ulwenziwo lokuhamba rhoqo kwamaxesha ... uluhlu luqhubeka njalo.
Ukuqala, kukho iREST API I-wrappers ebhalwe kwangaphambili kwi-PHP kunye neRuby ukudibanisa inkqubo yabo ngokulula kunye newebhusayithi yakho, isisa sakho okanye iSoftware njengeNkonzo.
tags: Umthengi we-b2bcadillacImirhumo ye-imeyileukhuphiswano onlineuphando lokonelisekarhumaukhuphiswano lwewebhu
Ngomhla wama-19 ku-Disemba 2009 ngo-11: 19 AM
Ndindwendwele iSproutBox kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, hayi kuba ndineprojekthi yesoftware, kodwa kuba ndinomdla kwimodeli yabo. Yindlela emnandi! Ndiyayithanda indawo yokuyila abayenzileyo.
Ngomhla wama-19 ku-Disemba 2009 ngo-2: 34 PM
UJon, yeyona ndlela ibalaseleyo kwitekhnoloji kunye nongxowankulu beshishini! Ndizibonile iinkampani ezininzi zilahla imali elungileyo yotyalo-mali kuphuhliso olubi kuba bezingayazi into abayenzayo. Oku kususa uninzi lomngcipheko!
Juni 9, 2011 ngo-7: 11 PM
Molo Douglas -
Enkosi ngovavanyo olukhulu! Ngexesha okoko ubhale le nto, siye songeza ezinye izinto kwiCheddarGetter, kubandakanya ukudityaniswa kwePayPal, iwizard ekhawulezayo, amaphepha okuhlawula, kunye nokunye! Sinezicwangciso ezibini zamaxabiso amatsha: isicwangciso sethu sokuqalisa se- $ 9 / mo, kunye nesicwangciso sokuqhushumba i- $ 79 / mo. Elona candelo lilungileyo malunga nezi zicwangciso kukuba uvunyelwe ukuthengiselana okungenamda kunye nabathengi: okwahlulahlula izicwangciso kukuba yimalini ungeniso olungenayo, kwaye zeziphi izinto onokuzithanda. Ungajonga zonke iinkcukacha zezicwangciso zamaxabiso apha: http://blog.cheddargetter.com/post/4211900640/new-pricing-plans.